Tuesday September 29, 2015 - 12:10:55 in Wararka
Xarig fannaan kuma cusba Soomaalida. Hadraawi iyo Cabdi-Qays ayaa nool. Cabdulle Raage ayaa na soo maray. Liisku waa dheer yahay. Sida maanta oo kale, waxaa berigaa jiray dad ku ra’yi ah madaxda ama dano ay ku haysteen dartood, iyaga oo aan loo dirsan is xilqaama oo isku dayi jiray in ay u qiil dayaan xarigga fannaanka. Weliba berigaas fannaaniinta la xiro waxay ahaayeen kuwa isku daya in ay dadka u sheegaan ama ay tusaan wax aanay Madaxdu dooneyn in uu shacabku ogaado ama uu arko.
Fannaan anigu waxaan u aqaan in uu yahay Biri-ma-geydo. Sidaa darteed ayaan keligeey fekeray. Waxaan qiyaasay su’aalaha uu sarkaalka Booliska Soomaaliland ee "dembiga” baarayaa uu weydiin karo marka uu mid mid u wareysto Xiddigaha xiran. Ka dibna waxaan mala awaalay jawaabaha uu fanaan kastaa ka bixin karo su’aasha la weydiiyo.